Lago di Como သို့သွားပါ ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | လမ်းပြ, italia
အီတလီမှာလှပတဲ့ရေကန်ရှုခင်းတစ်ခုရှိရင်၊ Como ရေကန်။ ဤတွင်အရာအားလုံးနည်းနည်းပေါင်းစပ်: လှပသော သဘာဝ, ကြော့ရှင်း, nobility နှင့်နိုင်ငံတကာဂျက် -set ကို။ သေချာတာပေါ့၊ ဂျော့ကလူနီတွင်ဤတွင်အိမ်တစ်အိမ်ရှိပြီးအီတလီသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်မှမြင့်မြတ်သောမိသားစုများစွာရှိသည်။
Lago di Como ကိုသင်တကယ်သိဖို့လိုတယ်။ ဒီတော့အီတလီကိုအနာဂတ်ခရီးတစ်ခုစီစဉ်မယ်ဆိုရင်အိုင်နဲ့လှပတဲ့ Como ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနဲ့သူ့အိမ်နီးချင်း Lecco ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ကြရအောင် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများ၊ နေရာများနှင့်ထောင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်သင့်သည်။
1 Como ရေကန်
2 Lago di Como ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်း
အင်းအိုင် Como ပြည်နယ်၌တည်ရှိ၏, အီတလီ, Candela ဒေသ, အမြင့် 200 မီတာအမြင့်မှာ။ တစ်ခုရှိ 146 စတုရန်းကီလိုမီတာ၏မျက်နှာပြင်areaရိယာ မီတာ ၄၀၀ ကျော်နက်သည်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် တကယ်နက်ရှိုင်းတဲ့ကန် ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းတတိယအကြီးဆုံးရေကန်ဖြစ်သည်။
အင်းအိုင် သူ့မှာလက်နက်သုံးခုရှိတယ် - Como, Lecco နှင့် Colico။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် Como လက်မောင်းတွင်အခြားအစိတ်အပိုင်းသုံးခုရှိပြီးပထမတစ်ခုသည် Como မြို့နှင့်ကိုက်ညီသည်။ Comacina ကျွန်းရေကန်နှင့်ရောမတို့၏အပျက်အယွင်းများကိုထိန်းသိမ်းသောတစ်ခုတည်းသောရေကန်။ အိုင်ကမ်းခြေရှိကျေးရွာများစွာရှိပြီးကြမ်းတမ်းပြီးသန်းကြွယ်သူဌေးအိမ်များသည်ကျွန်ုပ်အမည်ရှိကမ္ဘာပေါ်ရှိအနုပညာရှင်များ၏ပိုင်ရှင်များဖြစ်သည်။ ကလူနီသို့မဟုတ်ပင် မက်ဒေါနား.
ဤအမည်များသည်ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်သော်လည်းအိုင်၏လှပမှုသည်သမိုင်းကြောင်းအရသမိုင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများသည်ရှုခင်းကိုနှစ်သက်စွဲလမ်းခဲ့သည်။ Bonaparte, Verdi, Winston Churchill, Da Vinci ။.. မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလှသောရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းများကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးပြီ။
Lago di Como ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်း
ကျနော်တို့ကနေစတင်နိုင်ပါသည် လက်ကဲ့သို့၎င်း၏မြို့များသည်။ Como ၎င်းသည်ဘုရားသခင့်ကံကြမ္မာဖြစ်သည် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရင်ပြင်၊ မြှင့်တင်ရန်အဆောက်အ ဦး, စည်ပင်သာယာမျှော်စင်သို့မဟုတ် Broletto ။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် Gothic ပုံစံနှင့်နေရာတိုင်း၌အနုပညာလက်ရာများရှိသည်။ ၎င်းကို ၁၈ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်ပြီးစီးခဲ့သော်လည်း ၁၄ ရာစုအကုန်မှစတင်ခဲ့သည်။
Como မှအပျော်စီးသင်္ဘောသို့သွားနိုင်သည် ကမ်းရိုးတန်းရွာများကိုသိရန်သွားပါဥပမာအားဖြင့်, ကျော်ကြား Bellagio ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင်ကျော်ကြားသည့်ဥယျာဉ်များနှင့်၎င်း၏ villas များဖြစ်သောယနေ့ခေတ်ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိ Villa Este သို့မဟုတ် Villa Olmo တို့ပါဝင်သည်။ နွေ ဦး သို့မဟုတ်နွေရာသီသို့သွားလျှင်လှပသောလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်သင်လမ်းလျှောက်ရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည် ပန်းခြံများ အကြီးဆုံးမှာ Parco Spina သို့မဟုတ် Parco Sovraccomunales Brughiera Briantea ဖြစ်ပြီး ၂၃၀၀၀ ဟက်တာဖြစ်သည်။
ဆန့်ကျင်လျှင်သင်အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုကြိုက်လျှင်အချို့ရှိပါတယ် ပြတိုက် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Como တွင်မြူနီစီပယ်ပြတိုက် (၄) ခုနှင့်အခြားပုဂ္ဂလိကပြတိုက်များရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြားဖြစ်ပါတယ် ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်အဆိုပါ Garibaldi ပြတိုက် သမိုင်း၏ Pinacoteca Civica နှင့် Tempio Voltiano ပြတိုက် အရာလူသိများတဲ့စာရေးဆရာ Alessandro Volta ထံအပ်နှံသည်။ ဒါ့အပြင်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ် Como ပိုးပြတိုက်။
တစ်နှစ်ပတ်လုံးအဖြစ်အပျက်အမျိုးမျိုးရှိပြီးအထူးသဖြင့်လှပသောပွဲများဖြစ်သည် စျေးကွက် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ၊ ပရိဘောဂတွေ၊ အဝတ်အစားတွေအမြဲရှိတယ်။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် ရှေးရောမရေချိုးကန်များအမှန်မှာ၊ ရောမအမွေအနှစ်ကိုမြို့တော်နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွေ့ရသည်။ သာဓကအားဖြင့်တစ်ချိန်ကပလင်နီအငယ်ကိုပျော့ပျောင်းသောသာယာသောရာသီဥတုကြောင့်ချမ်းသာသောရောမများသည်သူတို့၏အပန်းဖြေအိမ်များကိုဤတွင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
နောက်ရာစုနှစ်များအတွင်းကိုလိုနီနှင့်မီလန်တို့၏မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်မိသားစုများနောက်သို့လိုက်ခဲ့ကြသောကြောင့်ယနေ့တွင် Villas Vigoni၊ Villa Salazar၊ La Gaeta, La Quiete, Palazzo Manzi, Villa D'Este ... အားလုံးတည်ရှိသည်။ သမိုင်းဝင်အိမ်တော် သူတို့ရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုသိမ်းဆည်းထားတယ်။ Como မှသင်မြင်နိုင်သော site အရေအတွက်သည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်မှာအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောသုတေသနတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုခုကိုလက်လွတ်မသွားစေရန်နှင့်သင်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသောအရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရန်အဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်သည်။
El lecco လက်မောင်း သူ၌လည်းသူ၏ကိုယ်ပိုင်ရှိပြီး Resegone နှင့် Grigna တို့၏အထွတ်အထိပ်များရှိသည်။ Is alpine မြို့ ၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထူးခြားမှုများစွာရှိပြီးအီတလီနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးသံမဏိနှင့်သံမဏိထုတ်လုပ်သည့်စင်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၂ ရာစု မှစတင်၍ တီထွင်ခဲ့သည်။ လှပတဲ့ boardwalk ရှိတယ် အလွန်ရင်ခုန်စရာနှင့်နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ် ကမ်းရိုးတန်းကျေးရွာများ Varenna, Mandello သို့မဟုတ် Valsassina ၏နှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းများကဲ့သို့အလွန်လှပသည်။
Varenna သူမသည်လှပပြီးသေးငယ်သည် ငါးဖမ်းရွာ ၎င်းသည်အိုင်အလယ်တွင်ရှိပြီးအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်တွင်းများနှင့် Brianza ၏လှပသောနယ်မြေနှင့်နီးကပ်မှုကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ ၎င်းသည်ရေကန်သို့ဆင်းသက်သောကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများနှင့်လှပသောဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ လူအများကယင်းကို“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလမ်း” ဟူ၍ သာခေါ်ဆိုကြသည်။ ကွဲပြားသောစတိုင်အမျိုးမျိုးရှိသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟောင်း ၄ ခုနှင့်ယခုရွေးချယ်ထားသောဟိုတယ်များဖြစ်လာသည့်အချို့သောကြမ်းတမ်းသောအိမ်များရှိသည်။
Varenna မှ, သင်တစ် ဦး အနေဖြင့်အဘို့အထွက်ခွာနိုင်ပါတယ် Fiumelatteဂူထဲရှိစမ်းရေတွင်းမှထွက်ပေါ်လာသည့်အဖြူရောင်အမြှုပ်တစ်မျိုးနှင့်တစ်နှစ်တာအချိန်အတိအကျတွင်အိုင်ဆီသို့လှည့်လည်သွားလာနေသည်။ ဒါ့အပြင်အနီးအနားမှာဖြစ်ပါတယ် Vezio ၏ရဲတိုက်Esino Lario မှာရှိတဲ့အလယ်ခေတ်မျှော်စင်နဲ့အတူ \_ t အဆိုပါ Lombard ကမိဖုရား Teodolinda ၏အိမ်။ ဒီနေ့အများပြည်သူအတွက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးထိုအရပ်မှအိုင်၏ရှုခင်းများကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။
ရွာ မန်ဒဲလား၎င်းအနေဖြင့်တောင်တန်းများတွင်တည်ရှိပြီး Lecco သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများသည်ခရီးသွားခြင်းကိုထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ ဒါဟာများအတွက်အလည်အပတ်ခရီးထိုက်တန်ပါတယ် alpine အလှတရား ၎င်း၏ရှုခင်းများ၊ ကမ်းခြေနှင့်ရာသီအလိုက်ရေလှုပ်ရှားမှုများ၊ အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဂီတပွဲများနှင့် Motocross.
အချိန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူအခြားဖြစ်နိုင်သောနေရာများ, ဖြစ်ကြသည် San Martino ချိုင့်ဝှမ်းနှင့် Valee d'Intelvi ။ ပထမဆုံး Lago di Como သည် Adda မြစ်ထဲသို့စီးထွက်သောအခါတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည်မီလန်andရိယာနှင့်ဗင်တိုတိုသမ္မတနိုင်ငံအကြားတည်ရှိပြီးလှပပြီးရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဒေသများနှင့်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအပြည့်ရှိသောချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရေကန်၊ ရေကန်ကြက်ခြေနီတောင်ထူထပ်သောကျောက်ဆောင်များ၊ အစိမ်းရောင်ချောက်ကမ်းပါးများ၊ Rossino Castle၊ ၁၆ ရာစုရှေးဟောင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ၁၄ ရာစုနံရံဆေးရေးပန်းချီများနှင့်အခြားများစွာရှိသည်။
နောက်ဆုံးသင်မည်သည့်မြို့များသို့မည်သည့်ကျေးရွာများသို့သွားမည်ကိုကောင်းစွာစီစဉ်ပြီးသည်နှင့်လည်းသင်သိသင့်သည် Como မှစတင်သောလှေခရီးစဉ်များစွာရှိပါသည် သူတို့လည်း Blevio, Tomo, Moltrasio နှင့် Cernobbio ကဲ့သို့သောနေရာများကစားကြသည် သဘာဝလမ်းကြောင်း နေသာသောနေ့ဖြစ်စေရန်လှပသောဥပမာ Caminos de Vía Regina သည်ယဉ်ကျေးမှုအလွန်ဖြစ်သည် Brunate အတွက် funicular၁၉ ရာစုမှသင့်အားရေကန်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်အကောင်းဆုံးအမြင်များကိုပေးသည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါက၎င်းကို "အဲလ်ပ်စ်၏လသာဆောင်" ဟုလူသိများသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » italia » Lago di Como သို့သွားရောက်ပါ